Horakoraky Ny Blaogy Bangladesh -12 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2018 7:38 GMT
* Diaspora: manome topimaso iray momba ireo zanaka am-pielezan'i Bangladesh eran'izao tontolo izao i Zubaer ao amin'ny blaogy Drishtipat, ary ny fiantraikan'ny fandefasan'izy ireo vola amin'ny toekarenan'i Bangladesh.
Ulysses ao amin'ny Back to Bangladesh, NRB izy tenany no nanapaka hevitra ny hiverina ao Bangladesh na teo aza ireo ahiahy maro sy adihevitra mikasika ireo antony tena ilàn'i Bangladesh azy ireo mafy dia mafy tokoa.
Na izany aza, mizara tantara iray noho ny hadisoam-panantenana i Rajputro, izay nahitàna NRB iray nandà asa iray tao amin'ny Anjerimanontolon'i Dhaka
* Politika: Nazzina avy amin'ny blaogy nikonian iray mitsikera ny kabary vao haingana nataon'ny Dr Muhammad, nahazo ny Loka Nobel, nanomezany fanomezana ireo torohevitra ho an'ny filoha sy ny lehiben'ny mpanolotsaina ny filohan'ny governemanta vonjimaika momba izay fomba hiatrehana ny toedraharaha politika ankehitriny ao Bangladesh
* Media: manebaka ny media iraisam-pirenena i Niraj amin'ny fiampangana fa isaky ny misy fikorontanana ara-politika miseho ao Bangladesh, dia ezahin'izy ireo poforoina hatrany fa handray ny fifehezana ireo silamo ary hanova an'i Bangladesh ho toa an'i Afghanistan. Hazavainy ny antony tsy hahatany Silamo velively an'i Bangladesh.
* Tsidika: mitondra antsika ho amina tsidika virtoaly iray any Dhaka miaraka amin'ny Google Earth i Rumi eo amin'ny blaogy Drishtipat.
Mandefa andiantsary roa manaraka lohahevitra ihany koa avy ao Bangladesh ny Bask to Bangladesh: ‘Ireo Ankizy eo ampiandrasana ny Eid‘ ary ‘mitsangana ny ‘Foochka (Panipuri) hita manerana ny tontolo’.
* Fampiasana kodiarandroa: manana tsiambaratelo vitsivitsy mikasika ny fitondràna kodiarandroa ho any Dhaka ny Back to Bangladesh.
* Maritrano: mampiditra tranonkala iray mikasika ny maritranon'i Dhaka i Shafiur avy amin'ny imperfect world|2006.
* Herisetra: manome kisarisarin'ireo fanafihana tamin'ny asidra natao tamin'ireo vehivavy tao Bangladesh i Jakarta Casual, ary ny fomba ataon'ny fiarahamonina hiatrehana io olana io
* Tafatafa: Nitafan’i Naeem Mohaiemen i Shahidul Alam, mpikatroka mafàna fo iray malaza amin'ny media sady talen'ilay Drik Picture Library (drik.net) efa nahazo loka.